Dalxiiska Hindiya wuxuu ku baxayaa Filim, Isboorti, Diin, Joogitaan, Shaqooyin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Dalxiiska Hindiya wuxuu ku baxayaa Filim, Isboorti, Diin, Joogitaan, Shaqooyin
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Sports • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Dalxiiska Hindiya oo go'an
Wasiirka Golaha Xukuumadda ee Uttarakhand, Satpal Maharaj, ayaa maanta sheegay in dowlad -goboleedku ay kaalmooyin maaliyadeed iyo lacageed oo kala duwan gaarsiisay waaxda dalxiiska ayna qaaday dhowr tallaabo oo lagu caawinayo.
Xidhmo INR 200 crores ah ayaa loo diyaariyey bixiyeyaasha adeegga COVID-saameeyay sida hawlwadeennada dalxiiska ee dalxiiska iyo hagayaasha webiga, iyo kuwo kale.
Qorshaynta ayaa ka socota degmooyinka Hindiya oo dhan si loo soo nooleeyo dalxiiska iyada oo la adeegsanayo habab kala duwan sida filimada iyo isboortiga, diinta, iyo joogitaanka iyo shaqooyinka.
Guddoomiyaha FICCI wuxuu sheegay in safarka, dalxiiska, iyo soo dhoweynta ay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee la silciyo ayna u badan tahay inay noqon doonaan kuwa ugu dambeeya ee soo kabsada.
Isaga oo ka hadlaya kalfadhiga Ballan-qaadka ah ee Socdaalka 2aad, Dalxiiska & Marti-gelinta e-Conclave: Resilience & The Road to Recovery oo ay soo qabanqaabisay FICCI, Mudane Maharaj, Wasiirka Golaha Waraabka, Xakameynta Daadka, Waraabka Yar, Goosashada Biyaha Roobka, Maaraynta Biyaha, Indo- Mashaariicda Webiga Nepal Uttarakhand, Dalxiiska, Xajka & Carwooyinka Diinta, Dhaqanka, ayaa sheegay in siyaasado kala duwan ay dowladdu fulisay si gacan looga geysto soo nooleynta qaybta.
“Siyaasadaha iyo kabitaannada kala duwan ee gobolku qaaday, gobolku wuxuu bixiyaa siyaasado lagu soo jiito oo lagu taageero warshadaha filimada si aad u toogato Uttarakhand. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku bixinnay kabitaan INR 10 lakhs oo ku yaal dhulalka buuraleyda ah iyo INR 7.5 lakhs oo ku yaal bannaanka hoostiisa Hoyga Deendayal Yojana. 3,400 hoy -guri ayaa la diiwaangeliyey illaa hadda qorshahan, ”ayuu yidhi.
Dheeraad ah, ka hadalka isbeddellada ugu dambeeyay ee dalxiiska, Mr. Maharaj wuxuu sheegay in dadku sidoo kale hadda sugayaan in la joogi doono iyo shaqooyinka. “Under Veer Chandra Singh Garhwali Yojana, waxaan ku bilownay diiwaangelin onlayn ah. Waxaan sidoo kale soo saarnay wareegyo kala duwan si kor loogu qaado safarka maxalliga ah, ”ayuu yiri.